तीन-बिन्दु बेल्ट: यो के हो?
चाँडै मार्शल स्थिति वा मिसिन बन्दूक मा ल्याउन सक्ने क्षमता विशेष गरी सैन्य र शिकारी साँचो हो। दोस्रो ढिलाइ उत्पादन, र जीवन वंचित सकेन। विशेष गरी यी पेशों मा मान्छे को लागि तीन-बिन्दु बेल्ट जस्ता उपकरण सिर्जना गरियो। यो सिस्टम शिकार, युद्ध, र थप हालै र खेल उपकरण अभिन्न भाग भएको छ।
नाम को मूल
को "तीन-बिन्दु" बेल्ट को नाम मध्यम "अस्थायी" बिन्दु को उपस्थितिको कारण थियो। यो हतियार तीन ठाउँमा सुरक्षित छ। राइफल, मेशिन गन वा राइफल लागि यो तीन-बिन्दु बेल्ट नयाँ संलग्न डिजाइन धेरै सुधार छ जो संग तुलना मा, पहिले नै पुरानो दुई-बिन्दु विकल्प भिन्न हुन्छ।
हतियार तीन-बिन्दु असर को लाभ के हुन्?
केही मानिसहरू लागि शिकार - पेशा धेरै रोमाञ्चक छ। अक्सर मोहित छैन धेरै परिणाम, तर पीछा धेरै घण्टा। मानिस पनि थकान को कुनै पनि अर्थमा बिना ठूलो दूरी कवर गर्न सक्षम छ। कहिल्यै शिकार मा गरिएको छ जो, त्यो सफलता झन् छिटो अवस्था लड्न हतियार ल्याउन र सही शट बनाउन क्षमता निर्भर थाह छ। यदि हात लोड छैन यो, गर्न सकिन्छ, र राइफल सधैं तयार छ। पारंपरिक दुई-बिन्दु बेल्ट केवल एक कार्य प्रदर्शन - हतियार बोक्नु श्रम देखि मानिसको छुटकारा गर्न। तर द्रुत sighting लागि तिनीहरूले विशेष सही शट मात्र छ भने हतियार को काँध हटाइएको गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई मा शामिल जो, दुई-बिन्दु बन्धन संरचना को संगठन को दृश्य मा डिजाइन थियो। बन्दूक लागि तीन-बिन्दु बेल्ट, क्लासिकल संलग्न गर्न विपरीत मा काँध बाट हटाउने बिना, एक हतियार बोक्न गर्न लामो समय को लागि अनुमति दिन्छ, र चाँडै यसलाई लागू गर्न आवश्यक भएमा।
संलग्न एक एकल बिन्दु को प्रयोग
एकल बिन्दु सामरिक बेल्ट सानो आकारको हतियार (मोडेल एक मीटर अधिक छैन) को लागि उपयुक्त हो। बन्धन बाहिर छ बट वा रिसीभर को पछिल्लो भाग को घाँटी संलग्न छ कि एक carabiner प्रयोग गरेर। एकल-बिन्दु द्रुत जारी सिस्टम प्रदर्शन गर्न fasteksy comprises - तीन दाँत विशेष कस्नु। यो सामरिक बेल्ट को बेफाइदा चलान समयमा हुन्छ - को खुट्टा मा विश्वास गुमाउन हतियार वा शरीर छ। निम्नानुसार यस्तो संरचना को कमजोरी हो:
एकल-बिन्दु बेल्ट टेप लामो बन्दुक लागि धेरै असुविधाजनक छ।
निलम्बन मालिक निरन्तर यो गिरावट कि होइन र फोहोर विभिन्न प्रकारका ट्रंक scooped छैन हतियार अनुगमन छ कि परिणाम संग, निकाय कस प्रदान गर्दैन।
हतियार को मानक दुई-बिन्दु असर
दुई carabiners को माध्यम द्वारा पारंपरिक दुई-बिन्दु बन्धन प्रणालीमा। तिनीहरूलाई को एक बट मा कुंडा र दोस्रो अपनाउँछन् - को backplate गर्न निलम्बन को मद्दतले। को रियर carbine नजिकै स्थित छ जो fasteksy, प्रयोग रिसेट गर्न सकिन्छ छिटो बन्दूक चलाउन। यो विधि एक क्लासिक र सहज पर्याप्त लगाउँथे गर्न एक भन्दा बढी काँध हतियार मानिन्छ। एक सामरिक एक हात हुन सक्छ बेल्ट को लम्बाइ समायोजन गर्नुहोस्। तर, यो प्रयोग यसको कमियां छ:
दृष्टि को लाइन मा लडाई स्थिति चाँडै हतियार स्विच गर्न अनुमति छैन।
अन्य एक काँध बाट दुई-बिन्दु बेल्ट हतियार पल्ला झुकन गर्न, तपाईं पूर्ण टेप हटाउन पर्छ, र यो धेरै लत्तो छ।
बेल्ट निर्माण पर्याप्त निलम्बन घनत्व प्रदान गर्दैन।
बेल्ट दुई-बिन्दु सामरिक प्रयोग बिस्तारै तीन-बिन्दु बदलिएको छ।
सबै भन्दा लोकप्रिय विकल्प
तीन-बिन्दु बेल्ट, दुई-बिन्दु विपरीत, एक काँध बाट अन्य सार्न सजिलो। यी सामरिक बेल्ट हतियार को तंग निर्धारण प्रदान गर्नुहोस्। तिनीहरूले तीव्र आगो हस्तक्षेप छैन। लामो दूरीमा यात्रा गर्दा तीन-बिन्दु बेल्ट सिद्ध छ। आवश्यक छ भने, यस्तो संरचना एक बिन्दु वा दुई-बिन्दु लगाउन परिवर्तित गर्न सकिन्छ। अगाडि निलम्बन (संलग्न) को काखमा साथ पहिलो देखि, र पनि पछिल्लो बढते अंक गर्न पछिल्लो गोफन कुंडा सारियो गर्न सकिन्छ। यो बन्दूक वा राइफल साथ फैलिएको जो गोफन, अगाडि निलम्बन स्लाइड प्रदर्शन उत्पादन गर्न सजिलो छ। तसर्थ, तीन-बिन्दु बेल्ट दुई-बिन्दु वा एकल-बिन्दु मा परिवर्तित गर्न सकिन्छ।
तीन-बिन्दु माउन्ट सिस्टम पुन: लोड गर्न असुविधाजनक छ बन्दूक। तिनीहरूले पाखुरा को विकृति रोक्न हुनेछ किनभने एक हतियार जस्तै बेल्ट मा राखे, अनुपयुक्त छ। तीन-बिन्दु बेल्ट असहज हो र बायाँ-हाते गर्न सकिन्छ, यो गोफन को काखमा साथ फैलयो रूपमा bagged खोल casings निकाल्न विन्डो समेट्छ।
तीन-बिन्दु माउन्ट हतियार विशेषताहरु
"फ्लोटिङबिन्दुअपवाद" तेस्रो बिन्दु यसको स्थान परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ:
अगाडि गोफन कुंडा। निर्धारण fasteksy गरेको छ। को रियर स्थिति रिसेट गर्न पर्याप्त बकसुआ loosen।
हतियार बेल्ट संग सुसज्जित छन् जो थप तत्व, एक किसिम, तीन-बिन्दु सामरिक टेप समावेश छैन। तिनीहरूले पहिले नै धेरै सान्त्वना देखाउँछ।
मानक तीन-बिन्दु बेल्ट "भैंसिहरु"
यो सामरिक बेल्ट2सेमी गोफन लामो बन्दुक को सबै प्रकार ले गर्न प्रयोग गरिन्छ। "भैंसिहरु-मानक" एक हमला राइफल बोक्न गर्न अभिप्रेरित छैन। बेल्ट उत्पादन निम्न मापदण्डहरु एक उत्पादन हो:
बेल्ट पट्टी4सेमी को एक चौडाई छ;
बेल्ट मोटाइ 2.5 मिमी छ;
उत्पादनहरु पलियामाइड को छन्;
उत्पादन 130 ग्राम वजन
यसको एनालग मानक छिटो जारी समारोह छ विपरीत, स्तरवृद्धि "भैंसिहरु-ब्लिट्ज"। बहु-कार्यात्मक सामरिक बेल्ट को प्रणाली छिटो-विज्ञप्ति कस्नु एक-हाथ हथियार तत्काल राहत लागि अनुमति दिन्छ छ।
Multifunction बन्दूक बेल्ट "भैंसिहरु-Saiga"
यो बेल्ट टेप, शिकारी को वातावरण यसको व्यापक आवेदन फेला विशेष गरी मालिक बन्दूक "Saiga" (लोकप्रिय यो मोडेल पनि "बँदेल" भनिएको छ)। यो मोडेल हतियार एक परिमार्जन Multifunctional बेल्ट चाहनुभएको छ लागि यो छ "भैंसिहरु।" यो बन्धन सिस्टम लागि, साथै अघिल्लो दुई को लागि, यो महत्वपूर्ण गोफन उपस्थिति छ। यसको चौडाइ कम्तीमा दुई सेन्टिमिटर छ। अघिल्लो दुई embodiments Multifunctional हतियार बेल्ट "भैंसिहरु-Saiga" विपरीत विभिन्न स्थान मा शिकारी हतियार हस्तान्तरण गर्न संभावना दिन्छ - एक खडा वा बैरल तल कम। यसलाई नियन्त्रण र थूथन अन्तर्गत राख्न अनुमति दिन्छ देखि समीक्षा शिकारी, एक बैरल अप संग राइफल बोकेको सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो। आवश्यक भएमा, स्थिति चाँडै परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
उत्पादनहरु को विशेषताहरु:
बेल्ट पट्टी4सेमी को एक चौडाई छ।
बेल्ट को मोटाई 2.5 मिमी छ।
रंग - जैतून वा कालो।
वजन - 130 ग्राम
नाम पेटेंट आविष्कार व्लादिमीर Harlampova, कम्पनी "सामरिक निर्णय" को संस्थापक दिइएको। यो माउन्ट सिस्टम मानक तीन-बिन्दु slings अभाव फरक छ। बेल्ट सिस्टम जो, को घन्टी शरीर मा जडान तीर धनुष एक टेप मुख्य podtyaga र girth, comprises। अगाडि गोफन कुंडा जोडिएको trehschelevoy podtyaga buckles बेल्ट को मद्दतले। बेल्ट अन्त बकसुआ देखि protrudes र निलम्बन बिन्दु को आन्दोलन कार्य गर्दछ। केही प्रयोगकर्ताहरूको राय मा, यो सिस्टम दुई कमियां छ:
यो unaesthetic देखिन्छ;
विदेशी वस्तुहरु (ब्रश, रूख शाखा) को लागि बेल्ट बाहिर देख बारम्बार clinging छन्।
यो बेल्ट प्रणाली को फाइदा आफ्नो छाती र हातमा हतियार सहन गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।
"ऋण एम 3"
यो एक आधुनिक बेल्ट प्रणाली पहना चिल्लो-खन्नु र पंप कार्य shotguns, submachine बन्दुक, sniper राइफल्स, मिसिन बन्दुक, ग्रेनेड launchers र मिसिन बन्दुक अनुमति छ। एम3को अघिल्लो संस्करणमा देखि मतभेद:
यो एक दुई-बिन्दु समायोज्य रूपमा बेल्ट प्रयोग गर्ने मौका दिन्छ किनभने एम3डिजाइन, विश्वव्यापी रूपमा मानिन्छ। बेल्ट पनि आफ्नो फिर्ता (Biathlon विकल्प) पछि हतियार बोक्नु कन्फिगर गर्न सकिँदैन।
यो एम3एक हटाउन सकिने काँध पट्टा छ।
buckles को संख्या कम।
डिजाइन एक कम हल्ला अस्तर र "रीगा" carbine संग सुसज्जित छ।
आवश्यक छैन विशेष पसलहरूमा र शिकार गर्न जान, यस्तो बहु-कार्यात्मक हतियार बेल्ट को गर्व मालिक हुन। सही कौशल संग, साथै सही सामाग्री भएको, तपाईंले आफ्नो हातले तीन-बिन्दु बेल्ट बनाउन सक्छ। यो आवश्यक हुनेछ:
बेल्ट बेल्ट। प्राथमिकताको लम्बाइमा 2.53मिटर देखि। बेल्ट चौडाइ 25 मिमी हुनुपर्छ।
Fasteksy -2टुक्रा।
Buckles -7टुक्रा।
तीन-बिन्दु सीट बेल्ट। यो के हो?
आधुनिक कार समावेश एक निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली। यसको मुख्य डिजाइन तत्व तीन-बिन्दु बेल्ट छ।
तिनीहरूले खतरनाक सार्ने व्यक्ति यात्री कक्ष मा रोक्न गर्दा वाहन टकराव वा अचानक ब्रेक लगान को फलस्वरूप। को चालक र यात्री स्वास्थ्य को लागि ठूलो मूल्य सम्भव छ जो केवल जब वी आकारको बेल्ट एक वर्दी ऊर्जा वितरण, छ। यो संरचना तीन-बिन्दु हो seatbelts। तलको फोटोमा प्रणाली कस्तो विचार गर्न सकिन्छ।
कसरी बेल्ट सुरक्षा प्रणाली?
तीन-बिन्दु सीट बेल्ट तीन तत्व बनेको छ:
पट्टा। उच्च-बल सामाग्री यसको उत्पादन लागि प्रयोग गरिन्छ। शरीर गर्न पट्टा फास्टनरों तीन ठाउँमा बाहिर छ: सामने मा, सीमा मा, मा महल गर्न जोर। कार सीट बेल्ट व्यक्ति को वृद्धि गर्न अनुकूल, आवश्यक भएमा, समायोजित गर्न सकिन्छ।
महल। यो मिसिन को पछाडि मा स्थित र सीट बेल्ट ताला सुविधा वहन छ। लक संरचना संकेत श्रृंखला कार श्रव्यदृश्य सिस्टम जडान जो एक स्विच comprises। यो बेल्ट प्रयोग को प्रभावकारिता को चालक र यात्रु स्मरण गराउन अभिप्रेरित छ। को पट्टा एक चल्ने धातु जिब्रो को माध्यम द्वारा लक जोडिएको छ।
तार। यो शरीर को सामने मा स्थित छ। स्वचालित बाध्य unwinding र घुमावदार बेल्ट लागि डिजाइन। को तार मा एक दुर्घटना को फलस्वरूप unwinding अवरुद्ध लागि inertial संयन्त्र छ। सीट बेल्ट ड्रम ढिलो आन्दोलनहरु देखि झिकेर छ।
यस यात्री कक्ष मा तीन-बिन्दु बेल्ट को स्थापना पहिलो 1959 मा वोल्वो द्वारा प्रस्तावित भएको थियो।
यात्री फिक्सिंग विकल्पहरू
गैर-inertial। यो सुरक्षा प्रणाली को लागि एक विशिष्ट व्यक्ति लागि अनुकूल उपयुक्त बेल्ट द्वारा विशेषता छ। यो विकल्प 1980 जारी नभएसम्म कार मा पाउन सकिन्छ। वर्तमान मोडेल यस्तो प्रणाली संग सुसज्जित छैन। यो fixation को बेफाइदा बच्चा को मापदण्डहरु अन्तर्गत पट्टा समायोजन गर्न नसक्नुको छ।
Inertia। यो सिस्टम एक स्वचालित retractor संग वयस्क र बाल कस समाधान गर्न सक्छन् जो एक बेल्ट, comprises। जब सीट बेल्ट ताला संयन्त्र को आन्दोलन ब्रेकिंग सम्भावित टकराव, बन्द छ। जो, लोड आधारमा लामो समयसम्म गर्न सकिँदैन टेप खण्डका कपडा लागू उत्पादन।
तीन-बिन्दु बेल्ट सैन्य क्षेत्रमा, खेल मा, शिकार मा लागू गरिएको छ। तिनीहरूले कार मा सबै भन्दा लोकप्रिय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण हो।
एक अपेक्षाकृत सरल संरचना भएको तीन-बिन्दु बेल्ट प्रणाली प्रयोग समयमा प्रदर्शनी महत्वपूर्ण स्थायित्व, विश्वसनीयता र सान्त्वना।
विशेषज्ञ सल्लाह: मिसिन लोड चयन
टेप Fuma: प्रयोग र वर्णन
वेल्डिंग पलटनेवाला को चयन: विशेषताहरू
बयलर "Lemax": समीक्षा। ग्याँस floorstanding बयलर "Lemax": विवरण, मूल्य
पानी पम्प: दिन एक सतह पंप। चयन र समीक्षा लागि सुझाव
प्यानल बीच जोइन्टहरूमा सील
खुट्टा मा कर्न्स कस्तो व्यवहार गर्ने?
"अजारो मदोमोइसेल": इत्रको समीक्षा
कसरी शार्क आकर्षित गर्न: विभिन्न उमेरका लागि मास्टर कक्षाहरू
संगीतकार Eshpay Andrey Yakovlevich: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, काम
कारण के हो र के गर्न: ड्राइव ड्राइव देख्न गर्छ?
Kropotkin (क्रास्नोडार क्षेत्र): विवरण, नक्सा, मौसम, र फोटो
स्याउ Earphones र आफ्नो विशेषताहरु
प्रतिरोध एक शब्द हो कि अस्पष्ट छ
एक सानो बच्चा को उपस्थिति मा छोडपत्र प्रक्रिया: आवश्यक छन् के कागजातहरू?
एक पल्ट देखि घरमा आधुनिक निर्माण प्रविधि
डिसेम्बर मा दिन को नाम: पुरुष र महिला नामहरू। डिसेम्बर मा दूत दिन